Iwu nzuzo - Dafne Italian Design
Adres nke weebụsaịtị anyị bụ: http://www.falcographix.com/dafne.
Kedu data nke anyị na-anakọta na ihe kpatara anyị ji anakọta
Mgbe ndị ọbịa na-ahapụ nkọwa na saịtị ahụ, anyị na-anakọta data egosipụtara n'ụdị ihe na mgbakwunye na adreesị IP onye ọbịa na eriri onye ọrụ ihe nchọgharị iji mee ka nchọpụta spam dị mfe.
Enwere ike inye eriri ajị anụ emepụtara na adreesị email gị (ma a na-akpọ hash) na ọrụ Gravatar iji hụ ma ị na-eji ya. Iwu nzuzo nke ọrụ Gravatar dị ebe a: https://automattic.com/privacy/. Mgbe akwadochara okwu gị, a na-ahụ profaịlụ profaịlụ gị n'ihu ọha n'ihe ndị kwuru gị.
Ọ bụrụ na i bulite onyonyo na weebụsaịtị, ị ga - ezere ibugote onyonyo nke gunyere data agbakwunyere (EXIF GPS). Ndị ọbịa websaịtị nwere ike ibudata ma wepụta data ọnọdụ ọ bụla na onyonyo dị na weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ịhapụ nkọwa na saịtị anyị, ị nwere ike ịhọrọ ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e gị na weebụsaịtị gị na kuki. Ejiri ha maka ịdị mma gị ka ị ghara ịbanye na nkọwa gị mgbe ị na-ekwu okwu ọzọ. Kuki ndị a ga-adị otu afọ.
Ọ bụrụ na ịnwere akaụntụ ma banye na saịtị a, a ga-edowe kuki oge ụfọdụ iji mara ma ihe nchọgharị gị nabatara kuki. Kuki a enweghị data nkeonwe ma ehichapụ ya mgbe imechi ihe nchọgharị ahụ.
Mgbe ị banyere, ọtụtụ kuki ga-edobe ịchekwa ozi nbanye gị na nhọrọ ngosipụta ihuenyo gị. Nweta kuki ụbọchị abụọ gara aga ebe kuki maka nhọrọ ihuenyo otu afọ gara aga. Ọ bụrụ n’ịhọrọ “Cheta m”, nnweta gị ga-adịgide ruo izu abụọ. Ọ bụrụ na ị pụọ na akaụntụ gị, a ga-ewepụ kuki ndị ahụ.
Ọ bụrụ na idegharị ma ọ bụ bipụta edemede, a ga-echekwa kuki ọzọ na ihe nchọgharị gị. Kuki a adịghị etinye data nkeonwe, kama ọ na-egosi NJ nke isiokwu ahụ degharịrị. A na-agwụ mgbe ụbọchị 1 gachara.
Edemede dị na saịtị a nwere ike ịgụnye ọdịnaya agbakwunyere (dịka ọmụmaatụ vidiyo, onyonyo, isiokwu, wdg). Ọdịnaya agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-eme omume dị ka ọ dị ka à ga-asị na onye ọbịa bịara na weebụsaịtị ọzọ.
Weebụsaịtị ndị a nwere ike ịnakọta data gbasara gị, jiri kuki, jikọta nsuso ndị ọzọ na nyochaa mmekọrịta gị na ha, gụnyere nsuso mmekọrịta gị na ọdịnaya agbakwunyere ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma jikọọ na weebụsaịtị ndị ahụ.
Ọ bụrụ na ịhapụ nkọwa, ekwuru na metadata ya ka edobere rue mgbe ebighi ebi. Nke a bụ otu anyị ga - esi amata ma kwenye ihe ọ bụla na - esote ya kama idowe ha na kwụ n'ahịrị.
Maka ndị ọrụ na-edebanye aha na weebụsaịtị anyị (ọ bụrụ na ọ bụla), anyị na-echekwa ozi nkeonwe ha nyere na profaịlụ njirimara ha. Ndị ọrụ niile nwere ike ịlele, dezie ma ọ bụ hichapụ ozi nkeonwe ha n'oge ọ bụla (belụsọ aha njirimara ha nke ha enweghị ike ịgbanwe). Ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwekwara ike ịlele ma dezie ozi a.
Kedu ikike ị nwere na data gị
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ dị na saịtị a, ma ọ bụ hapụ okwu, ị nwere ike ịrịọ ka ịnweta faịlụ mbupụ site na saịtị yana data nke anyị gbasara gị, gụnyere data ị nyere anyị. I nwekwara ike ịrịọ ka anyị kpochapụ data nkeonwe gbasara gị. Nke a anaghị etinye data nke anyị ji ụgwọ idobere maka ebumnuche nchịkwa, iwu ma ọ bụ nchekwa.
Ebe anyị na-eziga data gị
Enwere ike inyocha echiche ndị ọbịa site na ọrụ ịchọpụta spam na-akpaghị aka.
Ozi ịkpọtụrụ gị
Kedu usoro anyị guzobere iji gbochie mmebi data
Kedu mkpebi mkpebi akpaghị aka na / ma ọ bụ gosipụta data anyị na data onye ọrụ
Ngosiputa usoro iwu ihe ahia ahia